Warri har’a sobanii abukaatoo federaaliizimii fakkatan, warra qeensa buqqisaa turedha -obbo Shimallis – Fana Broadcasting Corporate
Warri har’a sobanii abukaatoo federaaliizimii fakkatan, warra qeensa buqqisaa turedha -obbo Shimallis
Finfinnee, Onkololeessa 8, 2012 (FBC) – Warri har’a abukaatoo federaaliizimii fakkatanii dubbachaa jiran, warra kanaan dura qeensa buqqisaa fi dhiira kolaasaa turedha jedhan itti aanaan preezdaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan.
Qaamni walqixummaa saba, sablammootaa fi ummattootaa amanee hin fudhanne, kanaan booda Oromiyaa fi Ityoophiyaa hogganuu hin danda’u jedhan.
Falaasamni ida’amuu tokkummaa, jaalala, dhiifamaa fi duudhaalee gaggaarii saboota sablammootaa fi ummattoota Ityoophiyaa kan cimsuu fi daran gabbisu akkasumas imala guddina diinagdee fi fayyadamummaa waliinii cimsuun fulduratti tarkaanfachiisudha jedhaniiru.
Kana booda walqixxummaa malee, olaantummaa qaama tokkoo fe’uun imaluun hin danda’amu; sobanii abukaatoo fakkaachuu fi dhugumaan abukaatoo ta’uunis adda jedhan obbo Shimallis
Obbo Shimallis Abdiisaan ebba kitaabaa muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad “Ida’amuu”, magaalaa Naqamteetti gaggeeffamerratti argamuudhan ergaa dabarsaniiru.
Ergichaanis biyyaa fi ummata Ityoophiyaa ceesisuuf falaasamni ida’amuu barbaachisaa ta’uu kaasaniiru.
Obbo Shimallis ummanni falaasamaa fi yaada hin qabne hin ce’u, yaadni cee’umsaa ijaarsaa fi guddina biyyaatif qooda olaanaa qaba waan ta’eef jedhaniiru.
Kan ormi waggaa 150tti hin hojjanne, nuti waggaa tokkoo fi walakkaatti hojjechuu dandeenyerra.
Kanaaf immoo addunyaa guutuun ragaa nuuf ba’eera, ba’aas jira jedhaniiru.
Mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo Oromiyaa afaanonni 5 fi isaa ol afaan federaalaa akka ta’an ni hojjetu jedhaniiru itti aanaan preezdaantichaa.